यस्तो सेक्स पार्क, जहाँ जानका लागी किड्नी समेत बेच्न‍े गरिन्छ..
प्रकासित मिति : २०७५ चैत्र १९, मंगलवार ०६:५९ प्रकासित समय : ०६:५९
कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार र कडा नियमकाबीच चीनमा पछिल्लो समय सेक्सप्रति अचम्मका रहस्य बाहिरिन थालेका छन् । चीनमा जो युवा युवति अबिवाहित छन, उनीहरु आफ्नो अभिभावक घरमा नभएको मौका छोपेर रात विताउन होटेल चहार्ने गर्छन् । बाबुआमा काममा व्यस्त हुँदा होस या कतै बाहिर निस्किदा होस युवायुवतिहरु होटेल खोज्दै पुग्ने गर्छन् ।
चीनमा झण्डै १२० करोड मानिसको बसोबास रहेको छ । तर, चीनमा मानिसहरु आधारभुत आवश्यकता नै नपाएर जीवन गुजारी रहेका पनि छन् ।
चीनमा गरिएको एक सर्वेक्षणले जनाएअनुसार महिलालाई किन सेक्स चािन्च भन्ने प्रश्नमा महिलाले भनेका छन्, प्रकृतिले हामीमाथि सेक्सको उच्चतम क्षमता दिएको छ । जसका कारण हामीमा सेक्सप्रतिको ज्वारभाटा उर्लेर आउँछ । प्रायः चिनियाँहरु सेक्सका लागि पछिल्लो समय किड्नी समेत बेच्न‍े गरेको जनाइन्छ ।
कलेज जीवनमा उनीहरुले गरेको प्रेम सेक्समा परिणत हुन एकदमै गाह्रो छ । चीनमा पछिल्लो समय युवा युवतीहरु आर्थिक स्थिति हेरेर मात्रै विवाह अथवा सेक्स गर्ने गरेकोक बताइन्छ । चीनमा अहिले सेक्सलाई युवतिले व्यापारको रुपमा लिने गरेको समेत बेलाबेलामा रिपोर्टहरु आउने गरेका छन् ।
यद्यपी चीनमा युवतीहरु विवाहप्रतिको चाहना भने घटेर गएको जनाइन्छ । विवाहभन्दा पहिले गरिने सेक्सको अनुपात समेत बढेर गएको छ । चीनको एक प्रान्तमा गरिएको अध्यनका अनुसार १३३ जवान महिलामा ७५ जना अर्थात ६१ प्रतिशतले सेक्सको अनुभव पहिले नै गरेका थिए ।
अहिले चीनमा पार्कमा सेक्स गर्नेहरुको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भएको जनाइन्छ । त्यहाँका पार्कहरुमा जोडिहरुका लागि अंकमाल, चुम्बन गर्न दिइएपनि उनीहरु सेकस प्रति आकर्षण हुने हुनाले होटेलको ढोकासम्म पुग्ने गरेका छन् । चीनका अधिकामस पार्कहरुमा राखिएका सुचना बोर्डहरुमा खुल्ला सेक्समाति बन्देज लगाइएको लेखिएको छ । तर, सामान्य रुपमा जोडिहरुलाई चुम्बन, अंकमाल भने छुट रहेको जनाइन्छ ।
यस्तै, पछिल्लो समय भने चीनमा सेक्स र पार्टनरबीचको सहमतिलाई पार्कबाट होटेलसम्म पुग्ने क्रमले भने जोडेको छ ।
वडा अध्यक्षलाई मेरो भन्नु छ…….!
जाजरकोट,कुशे गाउपालिका वडा नम्बर ६ अध्यक्ष महोदय, सम्झना तपाईंको रातो कलमले धेरे निर्णय गरिसकेको
‘सेक्सी’ नर्स, जहाँ पुरुष बिरामीहरुको भिड थेगी नसक्नु हुन्छ….
एजेन्सी। ताइवानको एक अस्पतालमा पुरुष बिरामीहरुको थेगी नसक्नु लाइन लाग्ने गर्छ। उनीहरु त्यहाँ राम्रो